बेलबारी पिटर्सबर्ग च्यालेन्ज कपको सेमीफाइनलमा - Pahilo Online
बेलबारी पिटर्सबर्ग च्यालेन्ज कपको सेमीफाइनलमा
पथरी । मोरङको पथरीशनिश्चरेमा जारी पिट्सबर्ग च्यालेन्ज कप फुटबल प्रतियोगितामा सोमबार भएको खेलमा बेलबारी एफ.सी. विजयी हुँदै सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेको छ ।
क्वाटरफाइनल खेलमा बेलबारीले राष्ट्रिय जागृति युवा क्लब विरुद्ध ४– १ को नतिजा निकाल्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो । खेलमा बेलबारीका विवेक पौडेलले २ गोल गरे भने कसिम राई र पारस खत्रीले १– १ गोल थप्दै बेलबारीलाई विजयी गराएको हो । दोस्रो हापको ५ औं मिनेटमा जागृतिका एलोन राईले सान्तवना गोल गरेका थिए । खेलको म्यान अफ द म्याच बेलबारीका २ गोलकर्ता विवेक पौडेल घोषित भए । उनले नगद रु २५ सय र टफी प्राप्त गरेका थिए ।
थ्री रिभर्स एफ.सी. अमेरिकाको आयोजनामा सुरु प्रतियोगितामा झापा, मोरङ र सुनसरीको ९ र भुटानी शरणार्थीको एक टिम गरी १० टिमले सहभागिता जनाएका थिए । प्रतियोगीताका सम्पूर्ण खेलहरु पथरीशनिश्चरे १० मा रहेको खेल मैदानमा संचालन भइरहेका छन् ।
प्रतियोगिता अन्तर्गत आजको खेल भाउन्ने एफ.सी. र दमक एफ.सी. बीच हुने आयोजकले बताएको छ । प्रतियोगिताको प्रथम र दास्रो हुने टिमलाई क्रमशः १ लाख १ हजार र दोस्रोले ५१ हजार नगद ट्रफी, मेडल र प्रमाण–पत्र प्रदान गरिने प्रतियोगिता संयोजक गणेश थक्लुङ्गले जानकारी गराए । प्रतियोगीताको फाइनल खेल कात्तिक १९ गते हुनेछ ।
मंगलवार, १६ कार्तिक २०७८, ०७:५७ November 2, 2021 मा प्रकाशित